6mls Beach House @Pea Soup - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Judy & Steve
U-Judy & Steve Ungumbungazi ovelele
I-6mls Beach house ilungiswe kahle futhi ilungele imibhangqwana nemindeni. Indawo enhle yokuphumula nokuphumula.
INDAWO......INDAWO......INDAWO...... ibanga nje lokuhamba ngezinyawo ukuya olwandle kanye nokuhamba ngezinyawo imizuzu eyishumi ukuya edolobheni ezindaweni zokupaka.
Sicela ufake imininingwane elandelayo uma ucela ukubhukha i-6mls beach house.
Ubulili kanye neminyaka elinganiselwa yazo zonke izihambeli
Isimo samanje sokugoma sazo zonke izihambeli
Ukucushwa kokulala kuyadingeka kulokhu kuhlala
SICELA UQAPHELE: Ukuthi senza ingxenye yethu ukuze sisize izivakashi zethu zihlale ziphephile ngalezi zikhathi ezingaqinisekile ngokuhlanza nokubulala amagciwane ezindaweni ezithintwa njalo ngaphambi kokuthi ungene.
Ikhishi elihlome ngokuphelele, itafula lokudlela kanye nosofa othokomele kakhulu ngezinye zezinto ezitholakala endaweni evulekile evulekile yokuhlala. Ukuze uhlale unethezekile unyaka wonke, indawo yokuhlala inohlelo oluhlukanisayo lokushisisa nokupholisa kanye nefenisha yophahla.
Futhi, njengoba siseduze kakhulu nolwandle, umoya ohelezayo wasolwandle uzosiza ekugcineni indlu ipholile ehlobo.
Le ndawo ibuye ibe nokubukwa okuhle kwamaxhaphozi kanye nengadi yangaphambili futhi inezicabha ezishelelayo eziya kumadekhi angaphambili nangemuva.
Lapha ungasebenzisa i-BBQ futhi udle ngenkathi ubuka ukubukwa okuhle kwamaxhaphozi. Ngemva kwesidlo sakusihlwa, vele uhlale futhi uphumule egumbini lokuphumula elingaphandle, ulalele ukuphahlazeka kwamagagasi kuyilapho izingane zidlala ngokuphepha egcekeni elikhulu elinotshani.
I-Bed 1 inombhede we-Queen othokomele kakhulu onomnyango oshelelayo oya emphemeni wangemuva nokubukwa okumangalisayo kwamaxhaphozi.
I-Bed 2 iphinde ithokozele umbhede we-Queen onethezekile nokubukwa kwengadi okuthandekayo.
I-Bed 3 iyisizinda sezingane esinemibhede emibili eyodwa.
Wonke amakamelo okulala anabalandeli abaphathekayo bezinyanga zasehlobo kanye nama-heaters amancane kawoyela ebusika.
Indawo yokugezela/yokuwasha e-6mls Beach House iwukuthinta kancane kokunethezeka.
Jabulela ukuhamba eshaweni ngokubukwa kwamaxhaphozi noma ucwiliswe kubhavu ozimele ngemva kosuku olumatasa ogwini lolwandle.
Indlu yethu yasogwini itholakala kahle nje ngamamitha ukusuka e-PEA SOUP, ulwandle oluvikelwe ngendlela emangalisayo oludume kakhulu futhi oluphephe ezinganeni. Uma ujabulela ukuhamba olwandle olumangalisayo ngakho-ke i-SOUTH BEACH yakho iseduze kwakho.
Ibungazwe ngu-Judy & Steve
Zihlole ngebhokisi lokukhiya ukhiye, sizokunikeza imininingwane eyengeziwe yalokhu ngaphambi kweholide lakho.
Siyajabula ukukushiya ukuze ujabulele ukuthula nokuthula kwendlu yethu yasogwini, ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kithi, nokho asikushayeli ucingo futhi sizojabula kakhulu ukusiza nganoma iyiphi indlela esingakwazi ngayo.
Siyajabula ukukushiya ukuze ujabulel…
UJudy & Steve Ungumbungazi ovelele